Ny takelaka fampitana ny fifindran'ny tanana dia an'ny zavatra azo ampiasaina. Amin'ny fampiasana fiara dia hitafy kely ny takelaka fametahana. Rehefa tonga amin'ny diplaoma iray ny akanjo dia mila soloina. Ahoana no ahafantarantsika fa tokony ovaina ny takelaka misy azy? Araka ny zavatra niainana taloha, heveriko fa ...Hamaky bebe kokoa »
Ny varotra tselatra dia misy amin'ny No MOQ!
Sarotra be ho antsika rehetra ity taona ity noho ny virus corona. Manantena izahay fa afaka miara-miasa mba ho tafavoaka velona sy hiroborobo. Nanomana tahiry be dia be izahay ao amin'ny trano fanatobiana entana any Shina sy Dubai ho anao. Raha te-hijery ny vidiny ianao raha te hahita entana bebe kokoa, aza misalasala mifandray aminay. Mifandraisa: +86 1887580 ...Hamaky bebe kokoa »
Serivisy fijanonana tokana ho an'ny fandefasana entana
Fotoana fandefasana: Jun-30-2020
1. MOQ ampahany 1, Fanaterana 24 ora. 2. Fivarotana fivarotana mivantana any Dubai sy Guangzhou 3. Fananana tahiry be 4. Faran'izay matotra ny vokatra miaraka amina kaody mihoatra ny 7000+ 5. Fampidirana ireo mpanamboatra 8 manana famokarana mihoatra ny 10 taonaHamaky bebe kokoa »